Alahady faha-23 D mandava-taona - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady faha-23 D mandava-taona
Daty : 08/09/2007
“Raiso ny hazofijaliana dia izory izay nodiaviko” (Lk 14, 25-33)
Tsy mora ny manara-dia an’i Jesoa. Ambarany amintsika androany ny safidy miandry izay te-hanara-dia azy : “izay tsy mitondra ny hazofijaliany sy tsy manaraka ahy dia tsy mety ho Mpianatro” (and. 27).
Fa inona ny hazofijaliana tsy maintsy zakaintsika? Ary ahoana no hahalalantsika ny lalana hizoran’i Kristy?
Ireo nanaraka an’i Jesoa tamin’izany andro izany dia voatery nisaraka tamin’ny fianakaviany, voatery mankahala ny rainy, ny reniny, ny rahalahy sy anabavy, ary hatramin’ny ainy aza, satria noheverina ho “sekta” ny fanarahana an’i Jesoa ka mazava loatra ireo nanaraka azy dia voaenjika niaraka taminy, ka mety hanefa hatramin’ny aina.
Ankehitriny kosa dia tsy toy izany, tsy voatery hifanohitra ny mpianaka mba ho tonga kristianina, “samy manao izay tiany”, tsy hifanerena ny finoana. Ny tsy maintsy hitandremana aza dia satria ny maha-kristianina indray no lasa voninahitra eo amin’ny fiaraha-monina ka misy ny manao izany ho fitaovana hivelomana na hahazoana voninahitra bebe kokoa.
Ho an’izay tena mpianatr’i Kristy anefa, tsy maintsy misy “safidy” atao ao : hihaina araka ny Evanjely. Tsy ny anarana no maha-kristianina fa io safidy io, safidy izay natomboka tamin’ny Batemy : fandavana an’i Satana sy ny fanangoleny rehetra mba hinoana an’Andriamanitra tokana olona telo. Tsy mora izany, ary misy hazofijaliana tsy maintsy zakaina ao.
Tsy sanatria tsy akory isika no handeha hitady fijaliana na sanatria i Kristy no faly amin’ny hijaliantsika. Tsy azo adino fa ny hazofijaliana dia famantarana ny ady atao amin’ny tsy rariny, famantarana ny fahavononana hiharitra hatramin’ny fahafatesana mba hanambara ny marina, mba hiharo ny marina ary mba hanehoana ny fara-fitiavana.
Voaantso hanaraka izany dian’i Kristy izany ny Mpianany hany ka mipetraka aloha mandinika. Dia samy mandinika isika, ary samy mahatsapa fa mbola lavitra izany maha-Mpianatr’i Kristy antsika izany. Dia hihemotra sy hiverin-dalana ve sa hotohizana ihany ny maha-kristianina anarany fotsiny, na dia ho fisehoana ivelany ihany aza?
Tsy misy mahalala ny hevitr’Andriamanitra, (Vak.I) indrindra rehefa mifatotra noho ny Evanjely isika (Vak II) ka maniry ny fiadanan’ny ratsy fanahy (sal 73) ! Ny fahatsapana izay fahalemena izay (Sal 89 setriny) sy ny fahatsapana ny fahalementsika (fanetren-tena<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->) no manosika antsika hanaraka marina an’i Kristy ka nahatsiaro mandrakariva ny teniny hoe : “Raha tsy izaho dia tsy mahefa na inona na inona ianareo” (Jn 15, 5b). Dia izay no hiandrandrantsika mandrakariva ny fahasoavany, hahatsapantsika fa eo anivontsika izy, ka mamindra fo sy miantra. Izy ilay miandry ny fiverenan’ny Zaza Mpandany sy mitondra eo an-tsorony ny ondry nania.
Tsy hatahotra ary isika ny hanamafy ny maha-mpianany antsika, handini-tena mandrakariva amin’ny maha-mpianany antsika, ka hanitsy izay mety ho faniriana sy tombontsoa tsy mifanaraka amin’ny maha-mpanara-dia an’i Kristy. Tsy ny vola na ny voninahitra na ny sakaiza (fianakaviana) no tanjona, fa ny fampanjakana ny fahamarianana sy ny fitiavana, eny fa na dia hiafara amin’ny famoizana ny aina aza izany.
Dia ventsoy mangina ao am-po ilay hira hoe : “O ry Jesoa Kristy Tompo! Arahiko ianao na aiza na aiza”.
<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]--> Jereo ny fivoasana tamin’ny alahady heriny 22D)
< Alahady faha-23 D tsotra mandavantaona
Alahady faha-22 Tsotra Mandavantaona D >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0699 s.] - Hanohana anay